यस्ता संकेत देखिए सम्झनुहोस् तपाईंको जीवनमा केही राम्रो हुँदैछ – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > यस्ता संकेत देखिए सम्झनुहोस् तपाईंको जीवनमा केही राम्रो हुँदैछ
admin April 15, 2021 जीवनशैली, रोचक	0
यस्ता छन् संकेतहरुः
बिहानै उठेर तपाईको पहिलो नजर दुध या दहीले भरिएको भाँडोमा पर्छ भने सम्झनुहोस् केही शुभ हुनेवाला छ। विहानै शंख, मन्दिरको घन्टीको आवाज सुनिनु पनि शुभको संकेत हो।
यदि कुनै व्यक्तिलाई विहान उठ्नेवित्तिकै उखुको बोट तथा उखु देखिन्छ भने पनि भिवष्यमा धन सम्बन्धी मामलामा सफलता प्राप्त हुने छ। यदि कुनै व्यक्तिलाई सपनामा पटक-पटक पानी, हरियाली, लक्ष्मीको वाहन उल्लू देखिन्छ भने सम्झनुहोस् कि आउने समयमा तपाईको धनसम्बन्धी सबै समस्या हट्ने छ।
यदि तपाई कुनै काम विशेषका लागि बाहिर निस्किनुभयो र बाटामा रातो सारीसहित सोह्र श्रृंगारमा कुनै महिला देखिइन् भने यो पनि महालक्ष्मीको कृपाको इसारा हो । विहान विहानै यस्तो देख्न पाइयो भने त्यो दिन तपाईका लागि महत्वपूर्ण बन्ने छ।
नारिवल, शंख, मयूर, हाँस, फूल आदि चीज-वस्तु विहान विहानै देखिन्छन् भने यो पनि शुभ संकेत हो। शास्त्रका अनुसार शुक्रवार महालक्ष्मीको पूजा गर्दा विशेष कृपा प्राप्त हुन्छ। यो दिन यदि कुनै कन्याले तपाईलाई सिक्का दिइन भने पनि यो शुभ संकेत हो।
यदि घरबाट निस्कदा बाटोमा गाई देखिन्छ भने पनि यो शुभ संकेत हो। गाई सेतो रंगको छ भने त यो झन धेरै शुभको संकेत हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिलाई सपनामा सेतो तथा सुनजस्तो सर्प देखिन्छ भने पनि यो महालक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुने संकेत हो । घरबाट निस्कनेवित्तिकै कुनै सफाईकर्मी (सरसफाई गर्ने व्यक्ति) देखिए भने पनि यो शुभ संकेत हुन्छ।
ते’जा’ब आ’क्र’म’ण’बाट पी’डित बनेकी पवित्रा कार्की र वसन्ती परियारलाई आयल निगममा जागिर
हिमानीले दिइन् पारसलाई माफी! पारससंगको तस्बिर राखेर लेखिन् यस्तो भावुक स्टाटस!
अहिले सामाजिक संजालमा भा ईर ल भिडियो जुन पत्याउन नै नसक्ने गरि यसरी चो रेर ल्यायो कमिलाले हिरा बन्यो संसार कै सबैभन्दा धनी कमिला(भिडियो हेर्नुस्)